Akụkọ - Global Premium Stroller na Stroller Market na 2020-Mmetụta nke COVID-19, Ọganihu Ọganihu Ọdịnihu na Ihe Chama Aka
"2020 Global High-end Stroller na Stroller Market Research Report" na-enyocha ọnọdụ ụlọ ọrụ na atụmanya nke mpaghara ndị isi na nkọwa zuru ezu dabere na ndị egwuregwu, mba, ụdị ngwaahịa na ụlọ ọrụ njedebe. Nkwupụta nyocha a na-enye nyocha nke ngalaba ahịa, dịka ohere ahịa, ịbubata na mbupụ nkọwa, ike ahịa, ndị nrụpụta kachasị, ọnụego uto na mpaghara ndị bụ isi. Ihe nchoputa ihe nchoputa nke uwa na ihe omuma ahia nke uwa bu ihe omuma nke enyere dika ndi emeputara, mpaghara, udiri na ngwa.
Dabere na akụkọ ahụ, Premium Pram na Baby Stroller ahịa ga-eto eto na ngwongwo kwa afọ nke xx% n'oge oge amụma (2019-2027), ma gafee uru nke US $ XX na njedebe nke 2027. Onye na-agagharị agagharị Ahịa na-enye profaịlụ ụlọ ọrụ nke ndị isi egwuregwu, gụnyere usoro agam n’ihu, nkọwapụta nke asọmpi, yana ọnọdụ mmepe mpaghara.
Ọrịa na-efe efe nke Covid-19 emetụtala ọtụtụ akụ na ụba ụwa na-emepe emepe. Akụkọ ahụ na-ekpuchi nyocha mmetụta ego na-akpata, nkwụsịtụ na agbụ nkịtị na ọnụ ụzọ emepere emepe ọhụrụ, nyocha zuru oke nke ndapụta azụmaahịa, nkewa nke ọnụ ụzọ mepere emepe ọhụrụ, wdg.
Premiumdị nkewa nke Global Premium na Stroller Market: Single Stroller, Multirol Stroller
Ngwa ahịa ahịa ụwa zuru oke na ngwa ahịa ụmụaka na-azụ ahịa: ọnwa 9 n'okpuru ọnwa 9 ka ọ gafee ọnwa 24 ọnwa 24.